diffusion pombi induction heater ine simba rekuchengetedza uye yakakwirira nekukurumidza
musha / Applications / Induction Heating / diffusion pombi induction heater ine simba rekuchengetedza uye kumhanya kwakanyanya
Categories: Air Cooling Heating Systems, remagetsi induction hita, Induction Heating Tags: tenga diffusion pombi induction heater, diffusion pombi hita, diffusion pombi induction hita, diffusion pombi induction hita mutengo, diffusion pombi induction heater ine simba rekuchengetedza, diffusion pombi magineti hita, electromagnetic diffusion pombi hita, electromagnetic induction diffusion pombi hita, simba rekuchengetedza diffusion pombi hita, induction diffusion pombi hita, induction heat diffusion pombi, magnetic induction heat diffusion pombi, vacuum coating diffusion pombi hita
Induction Heating diffusion pombi-Vacuum coating diffusion pombi electromagnetic induction heater panzvimbo yekupikisa kupisa ndiro inogona kuchengetedza magetsi akawanda?
Iyo yechinyakare yekuparadzira pombi inononoka kudziya, uye zvakare ine waya dzakatyoka, nyore kuita pfupi dunhu, kushomeka kwekuvimbika, uye kutadza kuri nyore. Zvinounza kukanganisa kwakawanda pakushanda chaiko. Nechikonzero ichi, HLQ yakanyatso gadzira yakakosha remagetsi induction hita yepombi yekuparadzira, iyo inoshandisa 7-8 kWh yemagetsi paawa mushure mekushandura. Iyo nguva inopfupikiswa neanopfuura hafu, uye kushanda kwacho kuri nyore, kuisirwa kuri nyore, uye chimiro chinyowani, chinogona kuunza nhau dzakanaka kuindasitiri yekuputira vacuum.
Electromagnetic induction heat inzira yekudziya muviri pachawo nekushandura simba remagetsi kuita magineti simba. Electromagnetic induction heat cable disk zvakananga ACTS pazasi pepombi kuburikidza neinduction kugadzira magineti, kuitira kuti pombi igadzire kupisa kwayo. Iyo electromagnetic choto chendiro haiburitse kupisa, kupisa kwekushandura kunosvika kupfuura 98%, tembiricha yekudzora ndeyechokwadi, PID inogona kugadzirisa otomatiki simba.
Zvakanakira diffusion pombi electromagnetic induction kupisa pamusoro pekupokana waya kudziyisa:
(1) kushanda kwepamusoro uye kuchengetedza simba, kuchengetedza anopfuura makumi matatu muzana emagetsi pane kuramba kupisa waya.
(2) kukurumidza kupisa kumhanya uye kunyange kudziyisa.
(3) kushanda kwakagadzikana uye kutonga kwakarurama kwekushisa
(4) kushanda nyore uye hupenyu hurefu hwebasa
Patembiricha yemumba, zvinotora 70-90 maminetsi kuti waya yechinyakare 15kw yekupikisa pombi ine dhayamita ye830mm kuti ikwire kusvika 230 madhigirii uye haichakwanisi kudziiswa, nepo 15kw electromagnetic heat coil inongotora 35-40 maminetsi. kukwidza tembiricha kusvika 230 madhigirii, kupfupisa zvakanyanya nguva yekupisa, kuvandudza kugona kwekugadzira, uye kuchengetedza simba rakawanda. Kana iyo midziyo yakavharwa, kana nzira yekupisa yekupisa yakashandiswa, nekuti choto chemagetsi chine kupisa kwakasara, pombi inotonhorera inoshanda kwenguva yakareba isati yamira, uye coil inoshandiswa pakupisa kwemagetsi haina kupisa. Mushure mekunge midziyo yakavharwa, inogona kukurumidza Kumisa pombi inotonhorera. Izvi zvinochengetedzawo kushandiswa kwesimba kwepombi inotonhorera. Zvinogona kuonekwa kuti magetsi ekudziya anochengetedza simba rinokwana 30% -60% pane kudziya kwechinyakare waya. Electromagnetic induction heat evaporation coating inogona kuvandudza zvakanyanya chiyero chekubuda, uye tembiricha yekubuda yakagadzikana, iyo inogona kudzivirira splash chiitiko cheiyo coating material, iyo firimu haizove nemhedzisiro yepinholes, inovandudza zvakanyanya chiyero chechigadzirwa, uye zvinodiwa zvakachena zvezvinhu zvekuputira zvakare zvakakwirira kudarika kushorwa. Zvinodiwa zvechoto zvakaderera. Iyo yakakwira-kuchena zvinhu inodiwa nechoto chekudzivirira (yemagetsi muchoto waya) inofanira kusvika 99.99% kuchena, nepo electromagnetic kudziyisa evaporation inoda chete kusvika 99.9%. Kubva pane zvese, zvinogona kuoneka kuti tekinoroji yekudziya evaporation tekinoroji yakadzikisa mutengo wekugadzira Coating.
Diffusion pombi induction heat ine otomatiki inogara tembiricha, otomatiki inoshanduka uye inogadziriswa mabasa, kuchengetedza simba, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kusimba uye hupenyu hurefu.
Kusvika kumaawa makumi mashanu kana kupfuura, pasina murazvo wakavhurika, unogona kuderedza tembiricha yemukati uye kurebesa hupenyu hwepombi yemvura inotonhorera.
Kuiswa nyore uye disassembly, pamwe nekuchengetedza pombi yekuparadzira.
Mushure mekuisa, haikanganisi iyo vacuum, haina kukanganisa chigadzirwa, uye haina kukanganisa nguva yekugadzira chigadzirwa chevira.
chigadzirwa chinovimbiswa kwemwedzi gumi nemiviri mahara, uye rutsigiro rwehunyanzvi rwunopihwa kwehupenyu hwose.
Chigadzirwa chacho hachisi nyore kuputsa, uye chinogona kuchinjwa nyore nyore nevira rekudzivirira.
Pakangoita dambudziko nechigadzirwa, mugadziri anotumira muchina wakasarudzika kuti uutsive nenguva.
Induction yekudziya muchina unoshandiswa zvakanyanya mukupisa kupisa, kudzima, kupisa, annealing, kudzima uye mamwe maindasitiri ekurapa kupisa, pamwe nekupisa, kupisa kupisa uye mamwe maindasitiri.
Saka ndezvipi zvakanakira electromagnetic induction heat system dzinoita kuti rishandiswe zvakafara mumigariro yose youpenyu?
Mazuva ano, vashandisi vazhinji vari kushandisa iyi induction hita. Vashandisi vanoishandisa nekuti ine zvayakanakira.
Induction yekudziya muchina inotora electromagnetic induction yekudziya maitiro kuti inyatso kupisa iyo workpiece. Iyo ine mabhenefiti ekukurumidza-ku-off kumhanya uye yakakwirira kushanda frequency.
Kuchengetedza magetsi uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Zvino kudzora kwehurumende kushatiswa kwemhepo kuri kuramba kuchiwedzera kuoma. Iyi ndiyo mukana we induction heat muchina
Iko kushandiswa kwe induction heat muchina kunogona kuderedza mutengo wekugadzira.
Induction yekudziya muchina ine yakakwira tekinoroji zvemukati, saka simba rayo rakanaka zvakare rakanaka.
Induction yekudziya muchina inogona kushandiswa nekuita kwakanaka kwazvo uye nekuita kwakanyanya.